Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Digniinta Xusuusta Cuntada ee Farxadda Dunida Veggie ee Farxadda leh
Global Vegetarian Foods Corp waxay dib u soo celinaysaa astaanta Happy Veggie World ee Vege Chicken Breast iyo Vegefarm brand Vege Stewed Lamb Chunk oo laga keenay suuqa maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay ku jiraan ukun aan ku qorneyn sumadda. Dadka xasaasiyad ku leh ukunta waa inaysan cunin alaabta dib loo soo celiyay ee hoos lagu sharxay.
Digniinta dib -u -xusuusinta cuntada ee la soo saaray Oktoobar 14, 2021, ayaa la cusbooneysiiyay si loogu daro macluumaad qeybinta oo dheeri ah. Macluumaadkan dheeraadka ah waxaa la aqoonsaday intii ay Hay'adda Kormeerka Cuntada Kanada (CFIA) baaritaan ku samaysay badbaadada cuntada.
Alaabooyinka soo socda ayaa lagu iibiyey Alberta iyo British Columbia waxaana laga yaabaa in lagu qaybiyey gobollada iyo dhulalka kale.
Badeecadaha la xusuusto
Dunida Veggie ee Farxada leh Naaska Digaagga ee Vege kumbiyuutarada 4 131218 Dhammaan koodhadhka aan ukunta lagu sheegin calaamadda
Beerta daaqsinka Gogosha hilibka lo'da ee la kariyey 3000 g 4 713224 372285 Dhammaan koodhadhka aan ukunta lagu sheegin calaamadda
Hubi si aad u ogaato haddii aad guriga ku haysato alaabta la soo celiyay. Badeecadaha la xusuusto waa in la tuuraa ama lagu soo celiyaa dukaankii laga iibsaday.
Haddii aad xasaasiyad ku leedahay ukunta, ha cunin alaabta dib loo soo celiyey maadaama ay keeni karaan falcelin halis ah ama nafta halis gelin karta.
Xusuus -qorkan waxaa kiciyay shirkadda. CFIA waxay samaynaysaa baaritaan badbaadada cuntada, taas oo horseedi karta in dib loo soo celiyo alaabtii kale. Haddii alaabta kale ee halista badan leh dib loo soo celiyo, CFIA waxay ku wargelin doontaa dadweynaha iyada oo loo marayo digniinaha Xusuus-qorka Cuntada.
CFIA waxay xaqiijineysaa in warshadaha ay suuqa ka saarayaan alaabta dib loo soo celiyay.
Ma jiraan wax falcelin ah oo la soo sheegay oo la xidhiidha isticmaalka badeecadan.
Hawaii waxay ku dhawaaqday xeerar cusub oo caalami ah...
Soo-booqdayaasha Mareykanka: Hawaii aad ayey u fiican tahay, COVID ama ma jiro COVID!
Amazon waxay ballan qaadaysaa heshiisyo waa weyn inta lagu jiro Cyber ​​​​Isniinta usbuuca
Madaxa Caafimaadka Dadweynaha ee Kanada oo soo saaray war cusub...
Diyaaradda Saudia Airlines oo qorsheyneysa inay ballaariso Caribbean-ka cusub ee...